Ciidamada Kenya oo si la yaab leh Gobolka GEDO ku geeyay M/Ku xigeenkii Jubbaland [Warbixin] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Ciidamada Kenya oo si la yaab leh Gobolka GEDO ku geeyay M/Ku xigeenkii Jubbaland [Warbixin]
Jan 16, 2020 - 4 Aragtiyood
Baardheere ( Kalshaale ) Maxamuud Sayid Aadan Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si qarsoodi ah ku yimid gobalka Gedo, Waxaana la sheegay inuu dhinaca Mandheera ka soo galay, islamarkaana uu hadda ku sugan yahay meel u dhaxeysa degmooyinka Luuq iyo Ceel-waaq ee gobalka Gedo.
Madaxwayne ku xigeenka waxaa la socday ciidamo Kenyan ah, waxaana lagu keenay gaadiidka qafilan ee Milateriga Kenya, Wafdigiisa ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Jubaland iyo Saraakiil Ciidan.
Wafdiga Maxamuud Sayid Aadan oo ay la socdaan ciidamo Kenyaan ah, Oo Muddo ku xayirnaa dhianca Mandheera kadib markii ciidankii ka goostay Jubaland eek u biiray dowladda iyo dad shacab ah ay is-hortaageen, ayaa gobalka kawada kulamo gaar gaar ah oo ay la qaadanayaan dadka degaanka iyo maamulada taabacsan.
Gobolka Gedo ayaa marti gelineya kulamo iska soo horjeeda oo ay wadaan masuuliyiin ka kala tirsan dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland.
Kkkk adeer dee shuka sooqaado sida dumark ama indha shareer kkkk jajuus foqal jajuus hhhh adeer adiga iyo ahmed madoobe labadiinuba waxaad tihiin shaqaale u shaqeeya kenya arka somaliya boos idin kama banaana ee jajuusineey bye bye
Ninkaan moodney inuu Gedo xoreyn oo habeeno soo seexan, CAR KA SOO SAAR SARIIRTA VILLA XAMAR.
– Kheyre shaqow qabtee Gedo yaa tagaa
Kkkk Maxamuud Sayid muxuu Gedo qaso lugano reer Xasan maanta DHAMASE kkkk B/xaawo iyo Ceelwaaq dhexdooda ku dhuumaalaysanayaa oo Kenya dadkiisii ka ilaalinaysaa kkkk Somali waa taa meel lagu kala tagay buu taagan yahay Axmed madobe lacagta uga guro sida Dhulbahante u wareeriyeen Isaaq iyo Majeerteen adigana u wareeri Ogaadeen iyo Kenya.
Mooryaan Maxamuud Sayid . Janan baa ku dhaama , waayo jeel buu si nabad ah u dhexjiifaa . Adiga siishkaa ku haya. Kulahaa waxuu joogaa meel Luuq & Ceelwaaq
u dhexeysa k.k.k. Imisa magaalo ayaa ku yaala Luuq & Ceelwaaq dhexdooda , dhanwalba. Shacabka waad matashaa waana lagaa ilaalinayaa . Dullinimo u dhimo waalidkeyoow. Saas ayuuba iigu yahay waalid .